Bogga ugu weyn 15 Shaqooyinka Habeenkii Ugu Fiican Oo Bixiya In ka Badan $ 50/Maalin 2022
Sawir laga soo qaaday https://www.istockphoto.com/
Lacag la'aan inaad si raaxo leh ugu noolaato waxay noqon kartaa mid aad u niyadjabsan. Ka sokow shaqadaada caadiga ah, waxaad u badan tahay inaad rabto fursad aad ku kasbato lacag caddaan ah oo dheeri ah.
Warka fiicani wuxuu yahay inay jiraan shaqooyin habeen ah oo weli aad lacag ku heli karto iyadoon loo eegin xirfaddaada.
Statistics ka BLS waxay muujinayaan in 7.4% shaqaaluhu ay shaqeeyaan habeenimo. Shaqaalaha soo haray waxay leeyihiin shaqo beddel joogto ah, wareeg wareeg ah, kala beddelasho, jadwal aan joogto ahayn, ama jadwal kale.
Tani waxay ka dhigan tahay in dad badani ay si fiican u shaqeeyaan, ay aad uga waxtar badan yihiin, oo ay rabaan inay helaan xoogaa lacag caddaan ah oo dheeraad ah iyagoo qabanaya shaqooyin habeenkii ah. Sidaa darteed, waxay raadiyaan shaqooyinka habeenkii ugu wanaagsan.
Waxaa jira shaqooyin badan oo habeenkii ah oo aad kasban karto wax ka badan $ 50 maalintii oo leh wax yar ama aan lahayn shahaado ama khibrad loo baahan yahay. Qaarkood waxay bixiyaan tababar goobta shaqada ah sababta oo ah waxay si adag u yihiin shaqooyinka habeenkii, halka kuwa kalena ay yihiin shaqooyin maalinle ah oo joogto ah halkaas oo aad ka shaqayn karto habeen oo weli aad kasban karto lacag caddaan ah oo dheeraad ah.
Marka, haddii aad tahay hurdo -hurdo ama laga yaabee, ogow inaad wax -soo -saar yeelan karto habeenkii, arag liiskayaga shaqooyinka habeenka ugu wanaagsan oo bixiya wax ka badan $ 50 maalintii.
Maxay ka dhigan tahay in habeen oo dhan la shaqeeyo?
Inaad shaqayso habeen waxay ka dhigan tahay inaad shaqayso saacadaha 11 fiidnimo ilaa 6da subaxnimo (8 saacadood) sida ay sheegtay BLS. Sababtoo ah dabeecadaha qaar ka mid ah shirkadaha iyo meheradaha, shaqaalaha habeenkii ayaa baahi weyn qaba.
Ganacsiyada qaarkood, shaqaynta habeenimo waa saacada shaqada ee ugu danbeysa ka hor nasashada maalinta halka qaar kalena, ay tahay wakhtiga shaqada ugu wayn. Waxaan u kala qaybin karnaa shaqooyinkan habeenimo laba qaybood
Dhammaan Shaqooyinka Habeenkii
Isbeddelka Habeenka Joogtada ah
Kuwani waa shaqooyin shaqadooda ugu weyn ay tahay habeen, saacadaha 11 -ka fiidnimo ilaa 6 -da aroornimo. Qaar ka mid ah meheradaha ayaa ku dhuftay iibka ugu sarreeya inta lagu jiro habeenka sidaa darteedna waxay u baahan yihiin shaqaale habeen ah. Eeg xoogaa shaqooyin habeenkii ah oo ka hooseeya qaybtan.
nin baarka ka adeega
Xulashada Bakhaarka Habeenkii
Isbedelka Habeenkii Habeenkii
Kuwani waa shaqooyin joogto ah oo kuu oggolaanaya inaad shaqeysid inta lagu jiro saacadaha habeenkii. Sababtoo ah waxay shaqeeyaan habeen iyo maalinba, waxay ku shaqeeyaan wareegyo wareegsan oo kuu oggolaanaya inaad shaqayso habeenka sidaad doorato. Waa kuwan qaar ka mid ah shaqooyinkii caadiga ahaa ee u saamaxayay wareejinta habeenkii.
Shaqaalaha Khadka Golaha
Shaqooyinka Habeenkii Ugu Fiican
Shaqooyinka Habeenkii meel walba waa nagu wareegsan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, dhammaantood laguma magacaabi karo shaqooyinka habeenka ugu fiican. Shaqooyinka habeenka ugu fiican ayaa ah kuwa aan walbahaarka lahayn oo dabacsanaan kugu filan si aad u dejiso qoyska iyo shaqada caadiga ah. Shaqooyinkani waxay abuuraan dakhli dheeraad ah mana dalbanayaan inta ugu badan. Qaar ka mid ah shaqooyinka habeenka ugu fiican ayaa ah;
Hawl -wadeennada Xamuulka qaada
Shaqaalaha safka golaha
Wadayaasha gawaarida xamuulka
In kasta oo kuwani ay yihiin qaar ka mid ah shaqooyinka ugu wanaagsan habeenkii, haddana ma aha shaqooyinka ugu mushaharka badan.
Waa Maxay 15ka Ugu Fiican ee Shaqooyinka Habeenkii
Shaqooyinka noocan oo kale ah waa kuwo dabacsanaan ku filan oo kuuma saarin dalabyo xad -dhaaf ah. Waa kuwan shaqooyinka ugu mushaharka wanaagsan habeenka oo kugu kasban kara wax ka badan $ 30/maalin.
Si taxaddar leh u fiirso in mid kasta oo ka mid ah shaqooyinkaas mushaharkoodu uu yahay sida lagu arkay BLS, Dhab ahaantii, Iyo ZipRecruiter
#-15 Karraaniga Raashinka
Celceliska Saacadda Saacadda: $ 11.37/hr
Celceliska Mushaharka Maalinlaha: $ 90.96/maalin
Haddii aad maamuli karto dukaan, dib u hagaajin karto khaanadaha oo aad qaadan karto amarada kaydka, shaqadan adiga ayaa iska leh. Dabacsanaantiisa ayaa kuu oggolaanaysa inaad shaqooyin kale dejiso oo aad weli ku kasbato lacag caddaan ah oo dheeraad ah oo aad ku shaqayso habeenkii taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah shaqooyinka habeenka ugu fiican.
Si kastaba ha ahaatee, magaalooyinka qaar ayaa bixiya lacag ka badan kuwa kale. Magaalooyinkaas qaarkood waa New York $ 13.04 / hr, Massachusetts $ 12.92/saacaddii, Washington $ 12.83 / hr.
Celcelis Lacag saacaddiiba$ 11.39 / hr
Celceliska Mushaharka Maalinlaha:91.12 / maalin
Adigoo ah mid ka mid ah shaqooyinka ugu wanaagsan habeenka, cabbitaanka ku jira baarka ayaa ku kasban kara wax ka badan $ 30/maalin. Waad awoodaa si fudud ku noqo baarka -baarka oo aad ka kasbato xoogaa lacag caddaan ah oo dheeri ah. Magaalooyinka qaar oo ka -shaqeeyayaashu ay ka mushaar badan yihiin kuwa kale waxaa ka mid ah: Houston, Texas $ 14.76 / hr, New York ee $ 14.46 / hr, iyo Austin, Texas $ 13.44 / hr
#- 13 Ganacsadaha Casino
Celcelis Lacag saacaddiiba $ 11.53 / hr
Celceliska Mushaharka Maalinlaha: $ 92.24 / maalintii
Ma waxaad tahay qof jecel ciyaaraha kaararka? Ama laga yaabee inuu xiiseynayo ciyaaro badan oo kaararka ah? Shaqadan ayaa adiga kugu habboon. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad ogaato xeerarka ciyaarta, u sharax macaamiisha, oo la falgal intaad ciyaareyso. Si kastaba ha ahaatee, magaalooyinka qaarkood, ganacsatada casino waxaa la siiyaa lacag ka badan. Waxay kala yihiin; Magaalada Atlantic, NJ $ 19.13 / hr, Beytlaxam, PA $ 18.29 / hr, Bariga Chicago, IN $ 17.81 / saac.
#- 12 Dab-damis
Celcelis Lacag saacaddiiba $ 13.23 / hr
Celceliska Mushaharka Maalinlaha: $ 105.84 / maalintii
Inaad noqoto dab -demiye waxay ku lug leedahay dhowr saacadood oo tababar shaqsiyeed ah. Waxaad u baahan doontaa inaad qaadato tababar dhowr ah oo ku saabsan shaqada iyo xaaladaha qaarkood oo aad u daran shahaado si aad si fiican u kasbato dab-demis ahaan.
Magaalooyinka ugu sarreeya ee ay shaqaalaha dab -demisku mushahar badan ka qaataan waa; New York ee $ 20.00 / hr, Beaufort, SC $ 18.67 / hr, Cherry Point, NC $ 16.72 / hr. Marka heerka khibradaadu kordho, mushaharkaaguna wuu kordhaa.
Celcelis Lacag saacaddiiba $ 13.32 / hr
Celceliska Mushaharka Maalinlaha: $ 106.56 / maalintii
Sida mid ka mid ah shaqooyinka habeen dhaxe ugu wanaagsan, roodhiyaasha waxay leeyihiin mudnaan ay ku maamulaan isbedelada si ay ugu habboonaato baahidooda. Maadaama ay shaqeeyaan saacad kasta, shaqaale habeennimo ayaa loo baahan yahay. Mushaharku wuu kordhaa marka heerka khibraddu korodho. Markaa haddii aad meel ku leedahay xirfado dubista, shaqadani adiga ayay kugu habboon tahay. Magaalooyinka, halkaas oo rootiyaasha ay ka helaan lacag badan, waa; New York ee $ 15.39 / hr, Denver, CO $ 14.42 / hr, Chicago IL $ 13.81 / hr
#-10 Kaydka Habeenkii
Celcelis Lacag saacaddiiba$ 13.80 / hr
Celceliska Mushaharka Maalinlaha: $ 110.40 / maalintii
Haddii aad tahay qof taxaddar leh oo si sahlan u ogaan kara waxyeellada, maxaad u tijaabin weyday kaydiyaha habeenkii? Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad buuxiso khaanadaha madhan, aqoonsato badeecadda waxyeellada leh, oo u sheeg maamulaha.
Marar badan, falalkan waxaa si hufan loo fuliyaa habeenkii. Sidoo kale, uma baahnid tababar gaar ah ama xirfad si aad u codsato shaqadan. Iyadoo aan loo eegin goobta, waxaa jira fursado yar oo mushahar kordhin leh xitaa heerka khibradda.
#-9 Xirmada Xirmada
Celcelis Lacag saacaddiiba $ 13.80 / hr
Sida qaar ka mid ah shaqooyinka habeenkii ugu wanaagsan, gacan-ku-hayeyaasha baakooyinka waxay soo dejiyaan oo ka dejiyaan baakadaha bakhaarka. Sababtaas awgeed, ma jirto xirfad gaar ah oo loo baahan yahay.
Magaalooyinka, halkaas oo hawl -wadeennada baakaduhu ay kasbadaan wax badan, waa; Chicago, IL $ 15.40 / hr, Philadelphia $ 15.01 / hr, Houston, TX $ 14.91 / hr
#-8 Dispatcher Habeenkii
Celcelis Lacag saacaddiiba $ 16 / hr
Celceliska Mushaharka Maalinlaha: $ 128 / maalintii
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad halkan ku sameyso waa inaad badeecadaha geyso meelaha. New York $ 19.29 / hr, Massachusetts $ 17.99 / hr, iyo Washington $ 18.98 / hr waa magaalooyinka qaar oo bixiya lacag ka badan kuwa kale.
#-7 Darawal Uber
Celcelis Lacag saacaddiiba $ 16.01 / hr
Celceliska Mushaharka Maalinlaha: $ 128.08 / maalintii
Inaad noqoto darawal Uber waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu wanaagsan ee habeenka aad isku dayi karto. Dhammaan waxaad u baahan tahay waa inaad iska qorto Uber sida darawal baabuurkaaga iyo voila! Lacag ayaa lagu siinayaa wadista gaadhigaaga iyo markasta oo aad doorato.
#-6 Xulashada Bakhaarka
Celcelis Lacag saacaddiiba $ 17 / hr
Celceliska Mushaharka Maalinlaha: $ 136 / maalintii
Xulashada bakhaarka ahaan, waxaad xaqiijineysaa in badeecada si habboon loo baakadeeyay oo la gaarsiiyo meesha ay maraakiibtu maraan. Waxa kale oo aad kaydisaa, xirxirtaa, oo la socotaa liiska alaabooyinka bakhaarka ku jira. New York, New Hampshire, iyo Hawaii, Warehouse Selectors ayaa la bixiyaa $ 18.29 / hr $ 17.63/saac, iyo $ 17.40 / hr siday u kala horreeyaan.
#-5 Hawl wade
Celcelis Lacag saacaddiiba$ 17.68 / hr
Celceliska Mushaharka Maalinlaha: $ 141.44 / maalintii
Mid ka mid ah shaqooyinka habeenkii ugu wanaagsan waa hawl-wadeenka gaadiidka. Halkan, waxaa lagaa rabaa inaad u guurto oo aad ka guurto bakhaarka. Waxa kale oo aad alaabta u rariaysaa dhawr goobood oo shaqo.
Magaalooyinka bixiya lacagta ka badan kuwa kale waa New York $ 18.31 / hr, Massachusetts $ 18.14 / hr, Washington $ 18.01 / hr
#-4 Darawalka Baabuurka
Celcelis Lacag saacaddiiba$ 20.51 / hr
Celceliska Mushaharka Maalinlaha: $ 164.08 / maalintii
Adiga oo ah darawal baabuur xamuul ah, waxaad ka rari kartaa alaabta hal meel oo aad u wareejiso meel kale. Mushaharka darawalka xamuulka wuxuu ku kala duwan yahay hadba heerka khibrada. Magaalooyinka sida Charlotte, NC $ 24.90 / hr, Indianapolis, IN $ 24.03 / hr, iyo Chattanooga, TN $ 23.40 / hr mushaar ka badan magaalooyinka kale.
Celcelis Lacag saacaddiiba $ 21.99 / hr
Celceliska Mushaharka Maalinlaha: $ 175.92 / maalintii
Mashiinnada ayaa mas'uul ka ah dejinta iyo hawlgelinta mashiinnada kombiyuutarka ee kala duwan. Waxay bixiyaan tababbarka shaqada oo markaa, kaliya waxay u baahan yihiin diblooma dugsiga sare. Magaalooyinka ugu mushaarka badan waxaa ka mid ah; Sandiego, CA $ 24.59 / hr, Newport News, VA $ 23.53 / hr, iyo Wichita, KS $ 23.51 / hr
#-2 Qoraa Madax Banaan
Celcelis Lacag saacaddiiba $ 30.39 / hr
Celceliska Mushaharka Maalinlaha: $ 243.12 / maalintii
Dhammaan qodobbada xorta ah waa inay awood kuu siiyaan inaad shaqeyso wakhtigaaga. Markaa, haddii habeenku yahay wakhtiga ugu fiican, waxaad qaadan kartaa shaqo xor ah oo weli lacag ayaad heli kartaa.
Eeg sababta ay uga mid tahay shaqooyinka habeenka ugu fiican? Magaalooyinka qaarkood oo qorayaasha madaxa -bannaan ay lacag badan ka helaan ayaa ah; Phoenix, AZ $ 45.13 / hr, San Francisco, iyo CA $ 26.95 / hr.
#-1 Guriga Qabta
Celceliska Saacadda Saacadda: $ 34/hr
Celceliska Mushaharka Maalinlaha: $ 272/maalintii
Haddii aad raadinayso meesha aad ku hoyan karto habeenkaaga, oo aad lacag ku hesho, guri fadhiista Shaqooyinka ayaa kuugu fiican. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad daryeesho hantida mulkiilaha guriga marka uu maqan yahay, daryeesho xayawaanka rabaayada ah, oo aad u sheegto arin kasta.
Ma u baahan tahay lacag caddaan ah oo dheeri ah si aad u kala saarto biilasha oo aad wax u iibsato? Shaqada habeenka oo la shaqeeyo waxay abuureysaa fursad lagu sameeyo lacag caddaan ah oo dheeraad ah iyadoo weli la sii waddo shaqooyinkaaga caadiga ah ama sida la doono.
Waxaan rajaynayaa inaad hesho mid adiga kugu habboon!
Goobaha Shukaansiga Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee ugu Fiican 15 | Qabashada Doonta
10 -ka Moodel ee ugu Lacagta Badan Adduunka 2021 -ka
Inta badan dhalinyarada ragga iyo dumarka leh muuqaalkoodu celcelis ahaan ka sarreeyaa waxay dadku u sheegeen hal mar inay...
Maxay yihiin Takhasusyada Dhakhtarka ugu Mushaharka Badan 2021? | Xirfadaha ugu Fiican
Investopedia waxay ku qiimeysay Mareykanka inuu leeyahay takhasusyada dhakhaatiirta ugu mushaarka badan adduunka. Dhakhaatiirta waa la ixtiraamay…